Izinto ezingu-4 engisanda kuzifunda ngokuvalwa. — Biologique
Izinto ezingu-4 engisanda kuzifunda ngokuvalwa.
Isithombe ngu- Unsplash
Ngisanda kunqamula ukuphumula kusuka kumuntu othandekayo kimi. Le ndoda nami sazi ukuthi ngineminyaka engama-25. Ngakho-ke, wangingazi ingxenye yeshumi lamashumi amabili. Lapho sihlangana, sobabili sasisebenza endaweni yokudlela eNew York. Ngangiyinsiva futhi wayenguThe Chef.
Ngisho noma sasingabangane iminyaka eminingi, sobabili sazi ukuthi sizogcina sibe ngaphezu kwalokho. Ngakho, lapho sithuthuka ngokwengeziwe, kwazizwa sengathi kwakunjalo njalo.
Iminyaka yethu yendaba yaphela lapho ngiqaphela ukuthi ubuhlobo abuzange buqondiswe endleleni engangizizwa ngayo ihlelekile kithi kokubili. Futhi, ngazizwa ngicindezelekile ukuthi ngidinga ukunikeza omunye umuntu (owayekade egijima) ithuba.
Ngakho-ke, ngenza enye yezinto ezinzima kunazo zonke engake ngadinga ukuzenza- Ngiqeda ubudlelwane nomngane othandekayo nomthandekayo. Ubani owaba umuntu ofanayo.
Lokhu okuhlangenwe nakho kuye kwangifundisa okuningi; Nokho, ingifundise kakhulu ngokuvalwa.
Nazi izinto ezingu-4 engizifundile mayelana nokuvalwa:
1. Ngeke njalo uhambe ngendlela ofuna ngayo.
Kumele ngivume, kuleso simo, kulula kimi ukuba ngihambe kulokhu ngoba ngiye 'ngithuthela kwesinye'. Ekufuneni kwami ukuqhubekela phambili, ngangimphoqa ukuba enze okufanayo. Ngazithola ngimshaya ngezimyalezo ukuze sihambe nathi kanye nethemba lokuthi kungenzeka yini. Ekugcineni kwavela ukuthi abantu babhekana nokulahleka ngokuhlukile. Ukumphoqa ukuba abhekane nayo futhi ngizokwenza ukuthi siqhubekele kokubili. Ngezinye izikhathi kungcono ukuvumela izinto zibe ngaphezu kokuphoqelela isimo sokuthula uma othile esathukuthele mayelana nomphumela.
2. Ukuphela akudingeki ukuba ujabule ngaso sonke isikhathi.
Njengomuntu omuhle, ngifisa ukuba phakathi kwabantu abacabanga kanjalo nalokhu. Ngezinye izikhathi ukulangazelela kwami kungaba namandla futhi kungalungile. Nginamandla kakhulu ekubhekaneni nezimo ezidlulayo ezidlule engingazibona ngokucacile kuzoholela ekubhujisweni. Ngakho-ke, lapho abanye bengenzi, kuyangiphazamisa. Ngizibuza, kungani bengaboni ukuthi lokhu kungcono kakhulu? Yilokho, yilokho engangikukwenza nalesi simo. Nganginaki imizwelo yakhe futhi ngidinga ukulila ngoba ngangibona ukuthi ubuhlobo bubekwe ngokucacile. Ngangingaphezu kweso simo engangikuphoqa ukuba abe okufanayo. Yikuphi, kutholakala njengokungacabangi nokuthukuthela lapho, konke engangikufuna kwakungcono kakhulu kokubili kithi. Ngiye ngafunda ukuthi ukuphela akudingeki ukuba ujabule ngaso sonke isikhathi. Ngesinye isikhathi abantu bayokuthukuthela futhi bahlale bethukuthele kuwe, kodwa umbono wabo nemizwa ayikwazi ukuthola indlela yokuqhubekela phambili.
3. Ukuvalwa kukhona into ozinikeza yona.
Akuyona imfihlo ukuthi ngifakwe 'ubuhlobo-wringer'. Futhi, akekho owake wangena efuna ukuba umngane nami noma abe nokuthula ngathi ngokuqhubeka nokuphila kwethu. Kuze kube lo mfana osanda kuvele. Uyabona, phakathi neminyaka eminingi yobungane nokuqonda, ngangihlale ngicabanga ukuthi uma isikhathi sifikile yena nami ngizohlukanisa ukuthi kuyoba nokuthula nokuthula-noma nini lapho kufika leso sikhathi. Ngacabanga lokhu ngoba ungomunye wabantu abathandekayo, abaqotho kakhulu nabathandekayo engake ngahlangana nabo. Ukwethuka nokukhathazeka kwami, ukusabela kwakhe kithi akusekho ndawonye akuzange kube nokuthula futhi lokho kwakungikhathaza. Ngaqhubeka ngizibuza, kungani enganginike ukuthula ngalokhu ukuze ngiqhubeke? Futhi, ngelinye ilanga, impendulo yayiyi- 'ngoba akayena onamandla okukunika ukuthula. Ungu'.
Nginguye! Nginguye ongakwazi ukuzinikela futhi ngithuthuke kulokhu, kungakhathaliseki ukuthi omunye umuntu ufuna, noma cha.
4. Ukuvalwa kuyisinqumo.
Emzamweni wami wokubhebhethekisa izinto futhi ngingabhalwa inja yowesifazane ngabangane bethu bobudlelwane iminyaka eminingi yendaba yethu emuva nangaphandle, ngibhala ukuthi ngangicabanga kakhulu ngaye-engikwenza njalo njalo. Ngaqala ukubhala ngezimfanelo zakhe ezinhle futhi ngabuza ukuthi ngabe ngenza isinqumo esifanele: ukushiya umuntu othembekile, onomusa futhi onomusa kimi. Yiqiniso, impendulo inguyebo. Ngenxa yokuthi ngangazi ukuthi ngithatha isinqumo njengoba ngizokwazi ngaso sonke isikhathi, abanye abantu ababili bangabahlukana kakhulu kodwa hhayi okuhle ndawonye-engikukholelwa ukuthi yilokho lapha. Nganquma ngaleso sikhathi ukuba ngikhethe ukuvalwa. Naphezu kokungaphenduli kwakhe, ngakhetha ukuqhubeka. Naphezu kokuthi ungibonisa ohlangothini oluhlukile ukuthi ungubani, ngiyazi inhliziyo yakhe. Unomusa, unothando futhi usekela. Sinikeza okuningi kakhulu komunye nomunye futhi konke engingakusho ukuthi 'Ngiyabonga'. Lokho ukuvalwa kwami.
Newer PostA playlist of love, 10 love songs for the summertime.
Older PostThe 4 Things That I have recently learnt about closure from a relationship.